Ny Tontolon’ny Blaogy Siriana Tao anatin’ny Herinandro · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Mey 2019 16:45 GMT
Sahirana indrindra niresaka mikasika ireo fivoarana toe-javatra tany Siria ny tontolon'ny blaogy Siriana tamin'ity herinandro ity. Hatramin'ny nahatongavan'ny Filoha Bashar al-Assad teo amin'ny fitondràna tamin'ny 2003, natombok'ireo mpitandro filaminana Siriana ny hetsika famoretana an'ireo mpanohitra sy mpitsipaka.
Manana fanadihadiana mahaliana mikasika izany fananihan'ny fitondrana Siriana izany i Ammar Abdulhamid avy any Amarji…
Tsy manao afa-tsy ny mampiakatra ny tsivalankazo hatrany hatrany ny fitondran'i Assad ary mampiseho ny hery maharitra anatiny, no sady eo am-panasongadinana ny tsy fahaizan'ny fiarahamonina iraisam-pirenena na teo aza ireo tsikerany, ny fitarainany, ny fiampangany sy ny fanapahankeviny hamokatra vokatra matotra avy eny an-kianja. Ny farany, manamarika ry Assad fa ao Siria tsy misy, na olona iray hafa aza, afa-tsy ry zareo, afaka ifampiraharahan'ny fiarahamonina iraisam-pirenena .
Mbola mikasika izany olana izany ihany i Rime Allaf avy ao amin'ny Mosaic…
Tsy vao voalohany izao i Michel Kilo (izay nandany fotoana maro tany am-ponja, toy ny siriana mpikatroka maro… fantaro izany, noho ny fifandraisany amin'ireo Rahalahy Silamo, noho ireo fiampangana tena mahonena indrindra!) no tafiditra tao amin'ilay hetsika fampielezankevitra fanelingelenana ataon'ny fitondrana, saingy navotsotra toy ny mahazatra izy taorian'ny ora vitsivitsy. Toa samihafa ny tamin'ity indray mitoraka ity, satria toa niandry fialantsiny izy ireo.
Nanana lahatsoratra iray momba an'i Michel Kilo i Joshua Landis avy ao amin'ny Syria Comment .Michel Kilo no olona fantadaza fantatra fa voasambotra voalohany tao anatin'ity fampielezankevitra ity, ary angamba ny endrika tena manana ny lanjany indrindra ho an'ny fanoherana siriàna.
Iray tamin'ireo mpikambana tena nomen-kaja indrindra tao anatin'ny fanoherana anatiny ao Siria i Kilo, ary ny nisamborana azy dia manamarika lavaka iray vaovao ho an'ny fitondrana ao anatin'ny asa famoretana amin'izao fotoana izao izay ataony amin'ireo tsy mitovy hevitra aminy sy ireo mpitaky fanavaozana. Nitandrina fatratra hatrany i Michel Kilo tamin'ny fanasarahana ny ezaka fanoherana ataony tsy hifangaro amin'ny drafitra fanakorontanana tohanan'i Etazonia mba hanozongozonana ny fitondrana. Raha ny marina, tsy niolakolaka izy tamin'ny fampiatahana an'i Etazonia ka nahatonga ireo mpitarika ny mpanohitra miaina any Etazonia, toa an'i Farid Ghadry, hanosotra azy foana ho toy ny mpitsikilo sy “apparatchik” miasa ho an'ny fitondràna.
Milaza i Abu Kareem avy ao amin'ny Levantine Dreamhouse hoe Avotsory i Michel & Anwar & Mahmoud &…
Ny ”heloka” niampangàna ireo voasambotra vao haingana ireo dia ny nanaovany sonia ilay fanambaràna Beiroty-Damas vao haingana nosoratan'ireo manampahaizana avy amin'ireo firenena roa tonta. Tsy diary revolisionera nosoratan'ny radikaly sambatra sy maniry ny hiady izany. Fanambaràna amin'ny fomba malefaka, mifandanja ary voasaina tsara izany, miaraka amin'ny fiteny manokana fampiasan'ny pan-Arabo izay mety tsara ara-politika. Kanefa, tao anatin'ny tangolingolika mitsotsorikany tanatin'ny famoretana nafana be tany amin'ny taona 1980 dia nitsara izany ho tsy azo leferina ny fitondrana baatista.
Lavitry ny politika, manana fandinihana mahaliana mikasika ny fironan‘ireo Arabo mpifindramonina any amin'ny toerana ipetrahany [Kanadà] manova ireo anarany arabo ho anarana tandrefana i Ihsan avy ao amin'ny My Thoughts & Notes ( Ny Eritreritro & Fanamarihako).
mikasika ireny Arabo rehetra ireny ilay fandinihana… Izaho irery no mitazona ny anarany aty! Ny tiako ambara dia izy rehetra, farafaharatsiny ireo olona nifanenana tamiko na ireo nifanehatra tamin'ny namako na niarahany, dia samy nanary ny anarany ary naka anarana tandrefana vaovao hafa avokoa!
Manana lahatsoratra mikasika Ny Lalànan'ny Maro an'isa, izay resaka nisokatra niarahany tamin'ny bilaogera Silamo iray mikasika izany olana izany i Yazan… ary koa ny fangatahana ny fanavaozana ny Kalifata Silamo.
Manana lahatsoratra tena mahaliana be mikasika ny fanarenana tanàna iray tranainy tao “Old Tartous” [tanàna Siriana Iray], izay tranobe iray efa 330 taona taorian'i Jesoa Kristy i Abu Fares avy ao amin'ny Abufares Said, samy manampy ny tsirony ho amin'ilay toerana avokoa ny vanim-potoana rehetra no sady mitazona ireo efa teo aloha ihany.
Vao eo an-tampon'ny arabe fotsiny, fifangaroana haimaritrano bizantina sy silamo taloha ity bolongana ity. Amin'ny teny hafa, efa tamin'ny 330 AD ireo fototra sy lavabato ao ambanin'ilay bolongana. Novitaina sy nohamafisin'ireo Mpiady Masina nandritra ny diany tany amin'ilay ”tany masina” ny rihana voalohany. Ny faharoa kosa dia tamin'ny andron'ny Fanjakana Ottoman izay nanampian'ny Frantsay lemaka iray hafa nandritra ny fibodoany an'i Siria.
Ary koa, manoratra mikasika ny toerana ara-tantara miafina iray: Bride Khan i Ghalia avy ao amin'ny Cocktail…
Khan al-Arous no anarany amin'ny teny Arabo ary manana anarana iray hafa koa izy io; Khan al-Sultan, natsangana tamin'ny taonjato faha-12 araka ny baikon'ny Sultan Salah Eddin al-Ayubi mba hanamboarana izany ao amin'ny làlana mampitohy an'i Damas amin'i Homs, eo amin'ny 50km avaratr'i Damas eo, mba hanampiana ireo fivahinianana masina sy ireo mpivezivezy mpandalo mba hiala sasatra ao anatiny.
Tsy ela akory izay, nasian'ny governemanta fanamboarana izy io
Ary farany fa tsy kely indrindra, manoratra mikasika ny lanjan'ny reny ao amin'ny finoana Silamo i Sara avy amin'ny Rollercoaster Journey…
ito misy zavatra kely noeritreretiko hozaraina aminareo ry namana. Inoako fa miteny fotsiny izany hoe, ao anatin'ny finoana Silamo, tokony hikarakara tsara ny vehivavy iray mialohan'ny zavatra rehetra isika . Mba hanafoanana ireo hevitra diso mikasika izany fotsiny, tsy voakarakara tsara ny vehivavy ao anatin'ny finoana Silamo.